July 2019 – " कञ्चनजंगा News "
काठमाण्डौ उपत्यकामा अब छिट्टै विद्युतीय सार्वजनिक बस गुड्ने (हेर्नुहोस फोटो फिचर सहित)
No Comments on काठमाण्डौ उपत्यकामा अब छिट्टै विद्युतीय सार्वजनिक बस गुड्ने (हेर्नुहोस फोटो फिचर सहित)
थापाका अनुसार दुई ओटा विद्युतीय बस चीनबाट नेपालतर्फ छुटिसकेका छन् । काठमाण्डौका सडकमा गुडिरहेका बसभन्दा फरक र नेपालको सडक सुहाउँदो बिजुली बस ल्याउन लागिएको अध्यक्ष थापाले बताउनु भयो ।
सुन्दर यातायात प्रालिले यो वर्ष झण्डै २५ ओटा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । जसका लागि ११ वटा विद्युतीय बसको सम्झौता भैसकेको र बाँकी बसका लागि पनि प्रक्रिया शुरु भैसकेको सुन्दर यातायात प्रालि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई वटा विद्युतीय बस नेपालका लागि हिँडिसकेका छन् । ती बस नेपाल आइसकेपछि परीक्षण हुनेछ र लगत्तै उपत्यकाका सडकमा विद्युतीय बस सञ्चालनमा आउनेछ ।’
सुन्दर यातायातले ल्याउन लागेको विद्युतीय बस यात्रुमैत्री रहेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पोखरेलले दाबी गर्नुभयो । सुरुवाती चरणमा दुई प्रकारका बस सञ्चालनमा आउनेछन् । ४० सिटे बसमा अरु ३० जना यात्रुले उभिएर नै आरामसँग यात्रा गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै ३५ सिटे बसमा पनि अरु २५ जना यात्रुले आरामदायी यात्राको अनुभूति गर्ने सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पोखरेलले दाबी गर्नुभयो ।
यी बसमा भने पछाडिको भागलाई महत्व दिँदै धेरै सिट पछाडि भागमा छन् । ‘यसले सिटमा नै बस्न खोज्नेहरु पछाडि जान्छन् र गाडीभित्रको चापलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । अगाडि भागमा आरक्षित सिट हुनाले पनि भीड पनि कम नै हुनेछ’ अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो । यी बसमा गरिएको सिट व्यवस्थापनले यात्रुको चापलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने कम्पनीले विश्वास लिएको छ ।
यात्रुहरुले आफ्नै कार्डबाट भुक्तानी गर्न सक्ने तथा मोवाइलबाट ‘क्युआर कोड स्क्यान गरेर पनि रकम भुक्तान गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीकाअनुसार अशक्त, अपाङ्ग र विद्यार्थीलाई सहुलियत हुनेछ ।
‘ऐनमा समस्या थियो, अब टेबलमा गैसक्यो । भाडादर, विद्युतीय महशुल दर र रुट÷परमिटको सम्बन्धमा पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, यसले पनि हामी उत्साहित छौं’ कम्पनीका अध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो ।
चार्जिङ स्टेशनका लागि अहिले डेढ रोपनी जग्गा भाडामा लिइएको र यसका लागि पहल भैरहेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पोखरेलले बताउनु भयो । काठमाण्डौको सडकको अवस्था र परिवेश हेरेर नै कम समयका चार्ज हुने मेसिन भित्र्याउन लागिएको उहाँले बताउनु भयो
No Comments on सिंगापुरसँग लज्जापद हारसँगै नेपालको टी-२० विश्वकप सपना अधुरै
१२ साउन, काठमाडौं । सिंगापुरसँग लज्जापद हारसँगै नेपालको टी-२० विश्वकप सपना अधुरै रहृयो । आइतबार भएको खेलमा सिंगापुरले नेपाललाई ८२ रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस- काठमाण्डौ उपत्यकामा अब छिट्टै विद्युतीय सार्वजनिक बस गुड्ने
चार्जिङ स्टेशनका लागि अहिले डेढ रोपनी जग्गा भाडामा लिइएको र यसका लागि पहल भैरहेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पोखरेलले बताउनु भयो । काठमाण्डौको सडकको अवस्था र परिवेश हेरेर नै कम समयका चार्ज हुने मेसिन भित्र्याउन लागिएको उहाँले बताउनु भयो ।
गायिका शान्तिश्री परियारको ‘गलबन्दी’को सफलता पछि फेरी आयो नया मार्मिक तीज गीत (हेर्नुहोस भिडियो)
No Comments on गायिका शान्तिश्री परियारको ‘गलबन्दी’को सफलता पछि फेरी आयो नया मार्मिक तीज गीत (हेर्नुहोस भिडियो)
गीतको भिडियोमा अञ्जली अधिकारी र गायिका परियारले अभिनय गरेका छन् । भिडियोलाई शिव विकले निर्देशन गरेका हुन् । मारुनी डिजिटल स्टुडियोमा रेकर्ड गरिएको गीतलाई कृष्ण विकले एरेन्ज गरेका हुन् ।
गीतको भिडियो दुर्गा पौडेलले खिचेका हुन् । यस गीतले तीजको मौलिकतालाई झल्काएको छ ।
मोरङ्ग अपडेट-मोरङ्गमा बनाइ सकेको चि*तामा ला*श ज*ल्न पाएन, आखिर म*लामी किन त्यसै फर्किए ? (भिडियो सहित)
मोरङ्ग– गत आइतबार देखि बेपत्ता रहेका मिक्लाजुङ वडा न.६ कालिदह निवासी अन्दाजी १७ बर्षीय अनिस कार्कीको श*व बुधबारका दिन नुनसरी खोलामा निर्बस्त्र रुपमा भेटिएको थियो ।
उनको श*व हेर्दा संकास्पद देखिएता पनि खोलाले बगाएको हुन सक्ने पुर्वानुमान गरियो । उनको पोस्टमार्टम गर्नका लागि मोरंगको मंगलबारे स्थित अस्पतालमा राखियो तर पोस्टमार्टम गर्ने बेलामा डाक्टरबाट यहाँ हुन नसक्ने जानकारी आएपछि त्यहाको माहोल तातिएको थियो ।
मृ*तक युवाको शरीरमा संकास्पद चोटपटक देखिएपछि स्थानीयले ह*त्या गरेर फालिएको आशंका गरेका छन् । घर बाट २ हजारको सामान पुराउनु छ भनेर निस्केका युवा भोलि पल्ट पनि नफर्के पछि उनकी श्रीमतीले उनका साथीलाई सोधेको बताइन ।
मृ*तकका साथीले काठमाडौँ गएको बताएपछि श्रीमती ढुक्कले बासिन तर बुधबार त्यो घटना सुन्दा उनको होस हवास उडेको उनको भनाइ छ । आखिर के हो सत्य तथ्य तल भिडियोमा मृतकको श्रीमती र आफन्तसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोला ।
No Comments on मोरङ्ग अपडेट-मोरङ्गमा बनाइ सकेको चि*तामा ला*श ज*ल्न पाएन, आखिर म*लामी किन त्यसै फर्किए ? (भिडियो सहित)
मनि ट्रान्सफरको रकम चोरी गर्र्ने पक्राउ
मनि ट्रान्सफरको रकम चौरी गर्ने दुई जनालाई धनुषा जिल्ला इलाका प्रहरी कार्यालयको गस्ती टोलीले शनिबार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा धनुषा जिल्ला शहीद नगरपालिका वडा नं ३ गोठकुहाका ११ वर्षीय गोविन्द यादव र सोही वडाका २८ वर्षीय रामुु यादव रहेका छन् ।
पक्राउ परेका यादवले यदुकोहास्थित पारस मनि ट्रान्सफरको सटरको ताल्चा फुटाइ टेबुलको घर्राबाट रु तीन लाख ३९ हजार ५०० रकम चोरी गरेको जनाइएको छ ।
रकमसहित शङ्कास्पदरूपमा हिँडिरहेको अवस्थामा गोविन्द यादवलाई गस्ती टोलीले पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार रकमसहित पक्राउ परेका गोविन्दलाई इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकोहाबाट चोरी मुद्दामा १० दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य शुरू गरिएको छ ।
त्यस्तै अनुसन्धानका क्रममा सोही घटनामा शङ्कास्पद देखिएका रामु यादवसमेतलाई नियन्यणमा लिइ थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।
तरकारीको भाउ ह्वातै बढ्यो,दुई साताको बीचमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि
No Comments on तरकारीको भाउ ह्वातै बढ्यो,दुई साताको बीचमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि
केही दिनपहिलेको वर्षाले क्षति पु¥याएको बहानामा व्यापारीले तरकारीको मूल्य आफूखुसी बढाएका छन् । मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएपछि उपभोक्तालाई भान्सा चलाउनै कठिन हुँदै गएको छ ।
दुई साताको बीचमा तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि हुँदा पनि नियमनकारी निकायले बजारमा हस्तक्षेप गरेको छैन ।गत वर्ष प्रतिकेजी ३० देखि ४० रुपैयाँ पर्ने हरियो तरकारीको अहिले दोब्बर मूल्यवृद्धि भएर प्रतिकेजी १ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । गोलभेंडाको बजार मूल्य प्रतिकेजी १ सय ३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।
कालीमाटी बजारभन्दा अन्य ठाउँमा सोही गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकेजी १ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् । यसैगरी, गत वर्ष घिरौलाको न्यूनतम मूल्य ६० रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिरौलाको प्रतिकिलो मूल्य १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ ।यो गत वर्षको तुलनामा दोब्बरले वृद्धि भएको हो
पुस १६ गते सम्म स्मार्ट लाइसेन्सको लागि आवेदन दिनेलाई सम्पर्क गर्न आग्रह
No Comments on पुस १६ गते सम्म स्मार्ट लाइसेन्सको लागि आवेदन दिनेलाई सम्पर्क गर्न आग्रह
काठमाण्डौ – यातायात व्यवस्था विभागले २०१८ डिसेम्बर ३१ अर्थात २०७५ पुस १६ गते सम्म स्मार्ट लाइसेन्सको लागि आवेदन दिनेलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । लाइसेन्स छपाई सकिएको र साउन १५ गतेसम्म विभागको कार्यालय नयाँ बानेश्वरबाट वितरण हुने विभागले जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र एकान्तकुनाबाट २०७५ पुस १६ गतेसम्म जारी तथा नवीकरणका लागि आवेदन दिएकाहरुलाई स्मार्ट लाइसेन्स लिन विभागले बोलाएको हो ।
सवारी चालकले राजश्व बुझाएको रसिदको आधारमा साउन १५ गतेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स विभागको कार्यालय नयाँ बानेश्वरबाट पाउने छन् भने साउन १९ गतेदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाबाट वितरण गरिने छ ।
हरियो तरकारीको बजार मूल्य प्रतिकेजी १ सय २० देखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेपछि सर्वसाधारणले हरियो तरकारी र सागपात खानै छाडेका छन् ।कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै मौसमी हरियो तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको छ । घिउ सिमी, बोडी, लौका, तितेकरेला, परबल, घिरौला, हरियो फर्सी, इस्कुस, गोलभेंडालगायतका मौसमी तरकारीको मूल्य अकासिएको छ ।
कालीमाटी बजारभन्दा अन्य ठाउँमा सोही गोलभेंडाको मूल्य प्रतिकेजी १ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको उपभोक्ता बताउँछन् । यसैगरी, गत वर्ष घिरौलाको न्यूनतम मूल्य ६० रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा घिरौलाको प्रतिकिलो मूल्य १ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ ।यो गत वर्षको तुलनामा दोब्बरले वृद्धि भएको हो ।
आफु ब्रुस लिको निकै ठुला्े फ्यान रहेको पनि बताउने यी बाबाले अन्र्तवार्ताकै क्रममा यसरी आफ्ना कला पनि देखाए (हेर्नुहोस् यो भिडियो)
No Comments on आफु ब्रुस लिको निकै ठुला्े फ्यान रहेको पनि बताउने यी बाबाले अन्र्तवार्ताकै क्रममा यसरी आफ्ना कला पनि देखाए (हेर्नुहोस् यो भिडियो)
पछिल्लो समय समाजिक संजाल युटुब तथा टिकटकमा निकै भाइरल बनेका सुन्दरीजलका भाईरल बाबा मृत्युञ्जय धेरै नेपालीहरुको मनमा बस्न सफल छन् । हुन त बाबा भन्ने वित्तिकै आफ्नै दुनियाँमा रम्ने अनि खासै अरुसँग सम्पर्कमा नरहने जोगी भन्ने बुझिन्छ तर यी बाबाले वास्तविक जोगी भनौं या योगीहरु अरुलाई हँसाउने देखि ज्ञान गुणका कुराहरु गर्दै सारा जगतलाई फ्रेस बनाउनृु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
हुन पनि घरबार छाडेर विन्दास जिवन बिताउने बाबाहरुबाट अहिलेको निराश मनहरुलाई एकैछिन भए पनि प्रेस बनाउँनु राम्रो कुरा हो । त्यसो त पछिल्लो समय यी बाबा जुत्ताका विज्ञापन देखि टिसर्टसम्म छाएका छन् । आफैमा गुमनाम रहेका बाबा यसरी भाईरल हुँदा यो बुढेसकालमा उनी निकै दंग अनि खुसी छन् ।
आफु ब्रुस लिको निकै ठुला्े फ्यान रहेको पनि बताउने यी बाबाले अन्र्तवार्ताकै क्रममा यसरी आफ्ना कला पनि देखाए, हेर्नुहोस् यो भिडियोः
यूएईमा समस्यामा परेकी नेपाली महिलाको उद्धार
यूएई – यूएईमा कम्पनीले तीन महिनादेखि तलब नदिई कामबाट निकालेपछि समस्यामा परेकी एक महिलाको उद्धार गरिएको छ ।
रसलखेमा रहेको रकिज अमार क्लिनिङ कम्पनीमा कार्यरत झापा सुरुङ्गाकी ३४ वर्षीया शोभा न्यौपानेलाई दूतावासले उद्धार गरेको हो ।
आफू कार्यरत कम्पनीले तलब सुविधा रोकेको र पछिल्लो एक महिनादेखि काममा नलगाई बेवारिसे बनाएको पीडित न्यौपानेको गुनासो छ । घर फर्काइदिन कम्पनीसँग आग्रह गर्दा पासपोर्ट अध्यागमनमा बुझाएको भन्दै बिलम्ब गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले सम्बन्धित जिल्ला समाजका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो समस्याबारे बताउनु भएको थियो । झापाका मणी सुबेदीले उहाँको उद्धारका लागि एनआरएन आबुधाबी क्षेत्रीय समितिसँग समन्वय गरेपछि एनआरएन आबुधाबी क्षेत्रीय समितिका पूर्व सहसचिव फणिन्द्र ढकाल रोशनको पहलमा शुक्रबार रसअलखेमाबाट उहाँको उद्धार गरिएको हो ।
उहाँलेे सहयाेगकाे लागि दूतावासमा निवदेन गर्नुभएकाे छ । दूतावासका श्रम काउन्सुलर भेषबहादुर कार्की र श्रमसहचारी मोतीराम भुषालले सम्बन्धित कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीलाई तुरुन्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
पीडित महिला अहिले दूतावासको सुरक्षित आवास गृहमा हुनुहुन्छ । उहाँ एकवर्ष पहिले काठमाण्डौमा रहेको पर्फेक्ट रिक्रुटिङ सर्भिस प्रालिमार्फत क्लिनरकाे काममा यूएई आउनुभएको थियो ।